Alahady faharoa - Symbole des Apôtres
Vous êtes ici : Accueil Agenda Eglise Fanekem-pinoana kristiana Alahady faharoa - Symbole des Apôtres
Alahady faharoa - Symbole des Apôtres
Isika mino an'Andriamanitra Irya Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na hita na tsy hita; Ary an'i Jesoa Kristy Tompo, Ilay Zanakalahy Tokan'Andriamanitra, nateraky ny Rainy talohan'izao rehetra izao, ny Mazava avy amin'ny Mazava.
Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra; nateraka fa tsy natao, miray amin'ny Ray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao; Noho ny amintsika olombelona sady ho famonjena antsika dia nidina avy tany an-danitra Izy, ary nataon'ny Fanahy Masina nofo avy tamin'i Maria Virijiny dia tonga olona Izy.
Nohomboana tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahan'i Pontio Pilato Izy; Nijay Izy ka nalevina. Nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra Izy. Niakatra ho any an-danitra Izy, ary nipetraka eo an-tànana ankavanan'ny Ray; Avy any no hiaviany indray amin'ny Voninahitra hitsara ny velona sy ny mary, ary mandrakizay ny Fanjakany.
Isika mino ny Fanahy Masina Tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny Ray sy Zanaka, ka itsaohana sy hankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany.
Isika mino ny Fiangonana Iray miorina amin'ny fanambaran'ny Apostoly, ary manerana izao tontolo izao.
Isika manaiky ny Batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny tenan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amena!